होडिङबोर्डका फ्रेम तोडफोड गरेको आरोपमा तीन पक्राउ | Ratopati
बिहीबार १२ जेठ, २०७९ Thursday, 26 May, 2022
personरासस exploreइलाम access_timeमाघ ११, २०७८ chat_bubble_outline0
होडिङबोर्डका फ्रेम तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले आज इलामबाट तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ । सूर्योदय नगरपालिका–७ कन्याममा राखिएका होडिङबोर्डमा प्रयोग गरिने फ्रेम तोडफोड गरेको भन्दै तीनजनालाई पक्राउ गरिएको हो ।
पक्राउ पर्नेमा सूर्योदय नगरपालिका–६ का २२ वर्षीय नरेश तामाङ र २२ वर्षीय अभिषेक तामाङ रहेका छन् । त्यस्तै माई नगरपालिका–१ का २२ वर्षीय रमेश बराइली रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरले जानकारी दिएको छ ।
गएराति ती फ्रेम तोडफोड गरेको सिसी टिभी क्यामेरामार्फत थाहा पाएर सोही भिडियोका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । कन्याम प्रदेश नं १ को पर्यटकीय नगरीका रूपमा परिचित छ । सोही ठाउँमा प्रयोग भएका र प्रयोग गर्न राखिएका विभिन्न होडिङबोर्डका फ्रेम तोडफोड गरेको बताइएको छ ।
उदयपुरमा एमाले र माओवादीका उम्मेदवार निर्विरोध
झापामा यस वर्ष पाँच लाख बिरुवा वितरण गरिँदै
रुस-युक्रेन द्वन्द्वका कारण हंगेरीमा सङ्कटकाल घोषणा
यी हुन् प्रदेश १ मा १० मत नकटाउने ३७ जना प्रमुख र अध्यक्षका उम्मेदवार
चीनले नेपाली विद्यार्थी फिर्ता गर्ने तयारी गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन
शाओमीको तीन नयाँइको–सिस्टम उत्पादनहरू नेपाली बजारमा
सेन्ट लरेन्स यौन दुर्व्यवहार प्रकरण : आन्दोलन रोकेर पठनपाठन सुचारु गर्ने सहमति
बैंक अफ काठमाण्डूका ग्राहकलाई ड्रिम्स ताज बिस्ट्रो तथा होस्टलरीमा १०% सम्मको छुट
काँग्रेसको कम्ब्याक : सातै प्रदेशमा पहिलो !
पृथ्वीसुब्बा सहभागी कार्यक्रममा एमाले कार्यकर्ताको नाराबाजी : अन्तर्घाती मुर्दावाद !
आगलागीबाट क्षति भएका परिवारलाई सोसेकको सहयोग